Paswọọdụ Chebe Excel 2010/2007/2003
> Resource> Utility> Olee otú iji Paswọdu Chebe Excel 2010/2007/2003
Gịnị mere Mkpa Paswọdu Chebe Excel Njikwa?
Microsoft Excel bụ spreadsheet software eji gbakọọ ego, mgbakọ na mwepụ na injinịa ọmụma, n'ihi ya, mgbe e dere nnọọ mkpa na isi data. Ọ bụrụ na ị chọrọ igbochi gị Microsoft Excel 2007 (2000, 2003, 2010, XP ...) si na-enweta, na-agụ, gbanwetụrụ ma ọ bụ dezie, i nwere ike ịtọ a paswọọdụ encrypt ma na-echebe Microsoft Excel spreadsheet data.
Okwuntughe na-bara uru iji gosi amata na nyochaa onwe gị mgbe emeso kọmputa faịlụ. Mgbe ị paswọọdụ chebe Excel faịlụ, Excel ga-akpali gị Tinye paswọọdụ gị oge ọzọ ị na-emeghe spreadsheet. Nwere nnọọ ọtụtụ Excel faịlụ ma ọ bụ nchekwa na-ezoro ezo? Ebe a na Excel izo ya ezo Software - Wondershare WinSuite 2012 bụ ihe kasị mma na ngwa ngwa ụzọ encrypt a ogbe nke Excel faịlụ ma ọ bụ nchekwa n'otu mgbe, ihe bụ ihe ọzọ, o nwere ike encrypt ọ bụla faịlụ na diski ike gị ma ọ bụ mbughari ngwaọrụ e wezụga Excel faịlụ, dị ka Okwu ya, PowerPoint ...
Olee otú Paswọdu Chebe Excel Njikwa?
Launch Wondershare WinSuite 2012 na họrọ "Nzuzo & Nche" encrypt nchekwa, ebe a ahọrọ "File izo ya ezo" site menu na n'aka ekpe.
Nzọụkwụ 1: Import Excel faịlụ
Pịa "Tinye Files", na ọ ga-popup na-emeghe-faịlụ window. Họrọ gị Excel faịlụ na ị chọrọ encrypt, pịa "OK", mgbe ahụ ikwu ọmụma ga-atụkwasịkwara software windows ndepụta igbe. I nwere ike na tinye ihe karịrị echiche.
Nzọụkwụ 2: Wepụ Excel faịlụ
Ọ bụrụ na ị họrọ na-ezighị ezi Excel akwụkwọ na ị na-adịghị mkpa encrypt, ị nwere ike wepu a ụfọdụ Excel faịlụ na ndepụta ahụ, ma ọ bụ wepu dum ndepụta.
Nzọụkwụ 3: Mee paswọọdụ
Tinye paswọọdụ gị ma na-egosi ya ọzọ, mgbe ahụ, paswọọdụ e debere ọma maka niile Excel faịlụ na ndepụta ahụ, ya bụ, mgbe e nwere ọtụtụ faịlụ / nchekwa na ndepụta ahụ, ha ga-abịakọrọ ka ezoro ezo na faịlụ.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị pịa "Hichapụ faịlụ mgbe archiving" ego-igbe, mgbe ahụ, na mbụ faịlụ ga-ehichapụ na-akpaghị aka mgbe ezoro ezo faịlụ na-amị.
Gịnị bụ bootmgr & otú ndozi bootmgr njehie
Chefuru Yahoo Paswọdu? Weghachi ya ugbu a!
Olee otú Idozi hal.dll Ne Error